सुपर ओभरमा पुगेको खेलमा दिल्लीले कोलकत्तालाई हरायो,सन्दिपको मध्यम प्रदर्शन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सुपर ओभरमा पुगेको खेलमा दिल्लीले कोलकत्तालाई हरायो,सन्दिपको मध्यम प्रदर्शन
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०७५, आईतवार
एजेन्सी । दिल्ली क्यापिटल्सले इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ । शनिबार भएको खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको दिल्लीले कोलकत्ता नाइट राइडर्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गर्दै दोस्रो जित निकालेको हो । दिल्लीस्थित फिरोज कोट्ला स्टेडियममा कोलकत्ताले दिएको १८६ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १८५ रन जोडेपछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो ।
सुपर ओभरमा दिल्लीले १ विकेट गुमाएर १० रन जोड्दै कोलकत्तालाई ११ रनको लक्ष्य दिएको थियो । दिल्लीका ऋषब पन्तले ६ रन जोडे । जवाफमा कोलकत्ताले १ विकेट गुमाएर ६ रन मात्र जोड्न सक्यो । उसका आन्द्रे रसेलले ४ रन जोडे । सुपर ओभरमा खेल जानुअघि दिल्लीका युवा ब्याट्सम्यान पृथ्वी शले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए । शतक बनाउन एक रनले चुकेका पृथ्वी ५५ बलमा ९९ रन जोडेर आउट भए । यस्तै कप्तान श्रेयस आयरले ४३ तथा शिखर धवनले १६ रन जोडे । कोलकत्ताका कुलदीप यादबले दुई तथा लोक्की फेर्गुसन, आन्द्रे रसेल र पियुस चावलाले एक एक विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकत्ताले पुरै २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १८५ रन बनाएको थियो । खराब सुरुवात गरेको कोलकत्ताका लागि आन्द्रे रसेल र कप्तान दिनेश कार्तिकले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । रसेलले ६२ तथा कप्तान दिनेशले ५० रन बनाए । यस्तै क्रिस ल्यानले २०, पियुस चावलाले अविजित १२, रोबिन उथप्पाले ११ तथा कुलदीप यादबले अविजित १० रन जोडे । दिल्लीका हर्सल पटेलले २ तथा सन्दीप लामिछाने, अमित मिश्रा, कागिसो राबडा र क्रिस मोरिसले एकरएक विकेट लिए ।
कोलकत्ताविरुद्ध सन्दीपले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ४ ओभरमा २९ रन खर्चिएर १ विकेट लिए । यस्तै सन्दीपले एक खेलाडीलाई रन आउट गराए । जितसंगै दिल्लीले ३ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ । दिल्ली लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कोलकत्ताले भने पहिलो हार व्यहोरेको छ । अघिल्ला २ खेल जितेको कोलकत्ताको पनि ४ अंक रहेको छ । कोलकत्ता शीर्ष स्थानमा छ ।
मेस्सीमाथि तीन महिनाको प्रतिबन्ध,५० हजार डलर जरिवाना
एजेन्सी । अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा तीन […]
गोसाइँकुण्ड जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? ठगिनु होला है यस्तो छ मेलाका लागि दररेट
रसुवा । जनैपूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने गोसाइँकुण्ड मेलाका लागि दररेट (शुल्क) निर्धारण भएको छ । मेलाको समयमा […]
नेपाली बालबालिकालाई सम्मान
अमृत शर्मा अस्ट्रेलिया चीनको सांघाइमा आयोजना भएको ´किड्स सुपर मोडल २०१९’ शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय […]
आयोजकको गल्तीले नेपालको उपविजेता पदक खोसियो !
काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोटको एसियाली फाइनलमा नेपाल तेस्रो भयो । सिंगापुरले दिएको १९२ रनको लक्ष्य […]
सिंगापुरसँग लज्जापद हारसँगै नेपालको टी-२० विश्वकप सपना अधुरै
काठमाडौं । आईसीसी ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट एसियाली छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल सिंगापुरसँग ८२ रनले […]
रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलको जाहेरी लिन प्रहरीले मानेन
स्पेनको बार्सिलोनामा उत्पेरणात्मक योग शिविर सम्पन्न (फोटोफिचर)
रवि लामिछानेकी श्रीमतीले दिईन् किशोर श्रेष्ठसहित ३ जनाविरुद्ध किर्ते गरेको भन्दै उजुरी
बाराक ओबामाको ३९ वर्ष पुरानो बास्केटबल जर्सी डेढ करोडमा बिक्री
भारतीय बिदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौंमा, यस्तो छ दुई दिने नेपाल बसाईको तालिका